लक-डाउन खुकुलो बनाउँदा भारतमा ह्वा`तै बढे कोरो-नाका नयाँ सङ्क्र`मित ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/लक-डाउन खुकुलो बनाउँदा भारतमा ह्वा`तै बढे कोरो-नाका नयाँ सङ्क्र`मित !
लक-डाउन खुकुलो बनाउँदा भारतमा ह्वा`तै बढे कोरो-नाका नयाँ सङ्क्र`मित !
`कोरोना भाइरसको सं`क्र`मणबाट भारतमा पहिलो पटक एकै दिन सबैभन्दा बढी संक्र`मित व्यक्ति भेटिएका छन् । भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रा`लयका अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा ४ हजार जना नयाँ संक्र`मित फेला परेका छन् भने २०० जनाको निध`न भएको छ ।
भारतमा यो सहित निध`न हुनेको सं`ख्या एक हजार १५६८ पुगेको छ भने संक्र`मितको सं`ख्या ४६ हजार ४३३ पुगेको छ । मन्त्रा`लयका अनुसार १२ हजार ७२७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अहिले पनि ३२ हजार १३८ जना उपचारका क्र`ममा रहेका छन् ।
भारतीय राज्य महा`राष्ट्रमा १४ हजार ५४१ जना तथा गुजरातमा ५ हजार ८०४ जना संक्र“मित भएको स्वा`स्थ्य मन्त्रा`लयले जनाएको छ । भारतको पश्चि`ममा पर्ने दुई धनी राज्य महा`राष्ट्र र गुज-रातमा सङ्क्र`मितको स`ङ्ख्या धेरै देखिएको छ।
भारतले चरणव`द्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै पसल र व्यापार व्यवसाय खोल्न अनुमति दिएको छ। घर फर्किन चाहने प्रवासी कामदा`रलाई विशेष रेलको व्यवस्था गरिदिएको छ। यसै बीच, कैयौं भारतीय राज्य,हरूले र`क्सीमा उल्लेख्य रुपमा कर बढाइरहेका छन्।
दिल्लीले उसकै शब्दमा “विशेष कोरोना शुल्क” भन्दै मङ्ग`लबारबाट र`क्सीमा ७० प्रतिशत कर लगाएको छ। आन्द्र प्रदेश र पश्चिम बंगा लले पनि करमा भारी वृद्धि गरेको छ।तर कर धेरै लगाइए पनि दिल्लीका र`क्सी पसलहरूमा मानिसहरूको ला मो लाइन लागेको छ र त्यहाँ प्र हरीले निय`मन गरिरहेको छ।
साउदीमा नेपाली श्रमिकहरुलाई घर फर्कन कम्पनीहरुको द`वाव !
अष्ट्रेलियामा आगलागीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २७ पुग्यो
सञ्जय दत्तको पहिलो चरणको उपचार भारतमै हुने, भने मेरा लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्